Teny misy heviny - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
haino aman-jery > Mifantoha amin'i Jesosy > Mifantoha amin'i Jesosy 2021-02 > Teny misy dikany
Maraina ny andro teo anoloana ny fipetrahan'ny governora romana tany Jerosalema. Ny ampahan'ny vahoaka israelianina dia nientanentanana sy nihoby ny lehibeny mba hangataka mafy amin'ny hanomboana an'i Jesosy amin'ny hazofijaliana. Ity sazy mahery setra ity, izay tsy azo namoaka afa-tsy noho ny heloka bevava natao tamin'ny mpitondra fanjakana araka ny lalàna romana, dia azon'ny jentilisa atao hoe Pontius Pilato, izay nankahalan'ny Jiosy, ihany.
Ary Jesosy nijanona teo anatrehany ary tsy maintsy namaly ny fanontaniany. Pontius Pilato dia nahalala fa ny lehiben'ny vahoaka dia nanolotra an'i Jesosy tamim-pialonana ary nanana ny tenin'ny vadiny teo am-pandrenesana izy fa tsy tokony hifanerasera amin'ity lehilahy marina ity. Nangina i Jesosy tamin'ny ankamaroan'ny fanontaniany.
Fantatr'i Pilato ny fandraisana tamim-pandresena izay nitondrana an'i Jesosy tao an-tanàna andro vitsivitsy lasa izay. Na eo aza izany dia nanandrana nanalavitra ny fahamarinana sy ny fahamarinana izy satria tsy nanana herim-po hijoroana tamin'ny fahareseny lahatra ary hanafaka an'i Jesosy. Naka rano i Pilato ary nanasa ny tànany teo alohan'ny vahoaka ary nilaza hoe: “Tsy manan-tsiny amin'ny ran'ity lehilahy ity aho; mijery ianao! " Ka samy meloka tamin'ny fahafatesan'i Jesosy ny vahoaka israelita sy ny Jentilisa rehetra.
Ary Pilato nanontany an'i Jesosy hoe: Hianao va no Mpanjakan'ny Jiosy? Rehefa nahazo ny valin-teniny izy dia nanao hoe: Ho anao manokana ve izany, sa nisy olona nilaza tamiko momba anao? Ny vahoakanao sy ny lohan'ny mpisorona no nanolotra anao teo an-tanako. F'inona 'ty nataonao?" Jesosy namaly hoe: Ny fanjakako tsy avy amin'izao tontolo izao, fa raha tsy izany dia hiady ho azy ny mpanompoko. Hoy koa i Pilato: “Mbola mpanjaka ve ianao? Jesosy namaly hoe: Hianao milaza fa mpanjaka Aho (Jaona 18,28-19,16).
Ireo sy ireto teny manaraka ireto dia teny misy dikany. Niankina tamin'izy ireo ny ain'i Jesosy sy ny fahafatesany. Ny Mpanjakan'ny mpanjaka rehetra dia nanolotra ny ainy ho an'ny zanak'olombelona rehetra. Jesosy dia maty sy nitsangana ho an'ny olona rehetra ary manolotra fiainana mandrakizay vaovao ho an'izay mino azy. Jesosy dia nanonona ny voninahitr'Andriamanitra, ny heriny sy ny fahalehibiazany, ny famirapiratany sy ny fananany ary tonga olombelona, ​​nefa tsy nanana ota. Tamin'ny alàlan'ny fahafatesany dia nesoriny ny hery sy ny tanjaky ny fahotana ary tamin'izay no nampifanarahany antsika tamin'ny Ray any an-danitra. Amin'ny maha Mpanjaka nitsangana tamin'ny maty azy dia nanisy fofonaina fiainana ara-panahy izy mba hahafahantsika ho iray aminy sy ny Ray amin'ny alàlan'ny Fanahy Masina. Jesosy tokoa no Mpanjakantsika. Ny fitiavany no anton'ny famonjena antsika. Sitrapony ny hiara-hiaina aminy mandrakizay ao amin'ny fanjakany sy ny voninahiny. Ireo teny ireo dia misy dikany tokoa ka mety hisy fiatraikany amin'ny fiainantsika rehetra. Amin'ny fitiavan'ilay Mpanjaka nitsangana tamin'ny maty, Jesosy.